Maxaa lagu xalliyay khilaafkii gobolka Gedo? | KEYDMEDIA ONLINE
Maxaa lagu xalliyay khilaafkii gobolka Gedo?
Xal rasmi ah ayaa laga gaaray murankii adkaa ee ka jiray gobolka Gedo, waxaana la iyiday inta badan qodobadii ay soo jeediyeen guddigii farsamo ee ku shiray Baydhabo.
MUQDISHO, Somaaliya - Mid ka mid ah arrimaha ugu adkaa ee Madaxweynihii waqtigu ka dhamaaday Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu ku fashilmay in uu xalliyo ayaa ahaa khilaafkii arrinta gobolka Gedo, kaas oo ugu dambeyn maanta la saxiixay heshiis laga gaaray murankii jiray.
Inta badan arrimaha gobolka Gedo ayaa loo daayay soo jeedintii guddigii ku shiray magaalada Baydhabo, waxaana lagu kordhiyay qodobbo aan badnay.
Golaha wadatashiga qaranka, ayaa go’aamiyay in Ra’iisul Wasaaraha Xukuumadda Xil-gaarsiinta Maxamed Xuseen Rooble, uu gar-wadeyn ka noqdo, Amniga iyo dib u heshiisiinta Jubbaland si ay habsami ugu dhacdo doorashada gobolka Gedo.
Guddigaas ayaa soo jeedin doona min labo xubnood, oo qabanaya jagada Guddoomiyaha iyo guddoomiye ku xigeynka degmada Garbahaarey iyagoo la tashanaya qeybaha kala duwan ee bulshada.